गुल्मीका स्थानिय निकायले घरभाडामै खर्चिए डेढ बर्षमा डेढ करोड रुपैँया, तीन गाउँपालिकाको केन्द्र अझै टुङ्गिएन – Gulminews
Home/मुख्य हेडलाईन/गुल्मीका स्थानिय निकायले घरभाडामै खर्चिए डेढ बर्षमा डेढ करोड रुपैँया, तीन गाउँपालिकाको केन्द्र अझै टुङ्गिएन
गुल्मीका स्थानिय निकायले घरभाडामै खर्चिए डेढ बर्षमा डेढ करोड रुपैँया, तीन गाउँपालिकाको केन्द्र अझै टुङ्गिएन
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ आश्विन ७, मंगलवार १६:५९ मा प्रकाशित
गुल्मी, ०७ असौज । गुल्मीका स्थानिय निकायहरुले घरभाडामै डेढ करोड रुपैँया खर्च गरेका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहले हालसम्म कुल एक करोड ३७ लाख ५२ हजार १३५ घरभाडामै खर्च गरेका हुन् । २०७३ फागुन २७ गते स्थानीय तह स्थापना भए पस्चात २०७५ असार मसान्तसम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहले घरभाडाबापत सो रकम बुझाएका हुन् । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले हालसम्म घरभाडास्वरुप २२ लाख ६६ हजार ६ सय खर्च गरेको छ । यो रकम जिल्लाका स्थानीय तहले बुझाउने मध्येको सबैभन्दा धेरै हो ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ समेत भाडामै संचालित छ । गाउँपालिकाको कार्यालय संचालनको लागि १६ कोठासहितको स्थानीय क्याम्पस भाडामा लिइएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण प्रसाद भण्डारी सहितका केहि कर्मचारी र गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधिका अर्याल बस्ने कोठा पनि भाडामै लिइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७३-७४ मा ६० हजार घरभाडामै बुझायो । त्यस्तै आर्थिक बर्ष ०७४-७५ मा ८ लाख ९२ हजार तथा आ.व. ०७५-७६ मा १३ लाख १४ हजार ६ सय खर्च भएको लेखापाल बाबुराम भुसालले जानकारी दिए ।
मदाने गाउँपालिकाले ०७५ असार मसान्तसम्म कुल ६ लाख ४५ हजार भाडा बुझाएको छ । गाउँपालिकाका दुई वडा समेत भाडामै संचालित छन् । जसमध्ये आ.व. ०७३÷७४ मा ३ महिनाको ७५ हजार गाउँपालिकाको घरभाडा बुझाएको छ । ०७४÷७५ मा मासिक २५ हजारका दरले तीन लाख तथा ०७५÷७६ मा मासिक १५ हजारका दरले एक लाख ८० हजार घरभाडामा खर्च भएको सुचना अधिकारी ऋषि पोखरेलले जानकारी दिए ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ७ का कार्यालय भाडामै संचालन भएका छन् । भने गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडामै संचालित छ । वडातर्फ आ.व. ०७३÷७४ मा १ लाख ५ हजार, ०७४÷७५ मा २ लाख ५२ हजार तथा ०७५÷७६ मा २ लाख ५२ हजार बुझाएको छ । भने गाउँपालिकाको भाडास्वरुप आ.व. ७३÷७४ मा ४८ हजार बुझाएको छ । त्यस्तै आ.व. ०७४÷७५ मा १ लाख ४४ हजार र आ.व. ७५÷७६ मा पनि १ लाख ४४ हजार बुझाएको छ । गाउँपालिकाले ०७५ असार मसान्तसम्म वडा तथा गाउँपालिका कार्यालयको गरी कुल ९ लाख ४५ हजार बुझाएको सुचना अधिकारी हिरामणी पाण्डेले जानकारी दिए ।
सत्यवती गाउँपालिकाले आ.व. ०७३÷७४ मा ४ महिनाको घरभाडा ३ लाख १० हजार बुझाएको छ । आ.व. ०७४÷७५ मा ७ लाख ९५ हजार तथा ०७५÷७६ मा ९ लाख ४५ हजार बुझाएको सुचना अधिकारी नेत्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । गाउँपालिका कार्यालय स्थापना भएदेखि ०७५ असार मसान्तसम्म कुल २० लाख ५० हजार घरभाडामै खर्च भएको पाण्डेले बताए ।
छत्रकोट गाउँपालिकाका पनि गाउँपालिका कार्यालय सहित विषयगत सबै शाखा भाडाकै घरमा संचालित छन् । सबै विषयगत शाखासहित आ.व. ०७४÷७५ देखि मासिक ४८ हजार १ सय का दरले गाउँपालिकाले भाडा बुझाउदैँ आएको छ । यसरी २४ महिनाको ११ लाख ५४ हजार ४ सय घरभाडामै खर्च भएको सुचना अधिकारी विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
जिल्लाको रुरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ को स्वास्थ्य चौकी र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लगायत अन्य विषयगत शाखाका कार्यालय पनि पनि भाडामै संचालित छ । गाउँपालिका कार्यालय वडामा संचालन गरिएको छ । यसभन्दा अगाडी संचालन गरिएको गाउँपालिका कार्यालयमा अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्षको कार्यकक्ष छ । गाउँपालिकाले कुल १० लाख १० हजार ५३५ घरभाडामै खर्च गरेको स्वास्थ्य संयोजक छत्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
इस्मा गाउँपालिका गठन हुँदा सुरुमा इस्मा स्वास्थ्य चौकी भवनमा कार्यालय व्यवस्थापन ग¥र्यो । त्यसपछि ०७४ असार १ गतेदेखि ०७५ मंसिर मसान्तसम्म प्रतिकोठा ३ हजारका दरले ७ कोठाको मासिक २१ हजार बुझाउने गरी घर भाडामा लिएको सुचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए । ०७५ पुष १ गतेबाट ३ कोठा थप गरी भाडा बुझाउने सम्झौता भयो । जसअनुसार दुई आर्थिक बर्षमा कुल ५ लाख ८८ हजार भाडामा खर्च भएको सुचना अधिकारी महतले बताए ।
मालिका गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ र ५ का कार्यालय समेत भाडामै संचालित छन् । आ.व. ७३÷७४ मा वडा कार्यालयको भाडास्वरुप २५ हजार र ०७४÷७५ मा ७५ हजार खर्च भयो । आ.व. ०७५÷७६ मा ५ नम्बर वडा कार्यालयको मात्रै ३२ हजार तथा सोहि आ.व.मा गाउँपालिका कार्यालयको ८८ हजार भाडामा खर्च भयो । वडा तथा गाउँपालिकाको गरी मालिका गाउँपालिकामा २ लाख २० हजार खर्च भएको सुचना अधिकारी जगत बहादुर पौडेलले जानकारी दिए । २०७६ वैशाख २५ गतेबाट गाउँपालिकाले बहुउदेश्यीय सभाहलबाट कार्यालय संचालन गरेको पौडेलले बताए ।
रेसुगां नगरपालिकाले सात वडासहित नगरपालिकाको भवनको घरभाडा बुझाउदै आएको छ । भवन तथा वडासहितको ०७५ असार मसान्तसम्म कुल १४ लाख ५७ हजार ४० घरभाडा बुझाएको छ । नगरपालिका सुरुमा तम्घास बृहत खानेपानी आयोजनाको घर भाडामा लिएर बसेको थियो । त्यहाँ मासिक १४ हजार ६६५ का दरले १६ महिनाको कुल २ लाख ३४ हजार ६४० बुझाएको सुचना प्रविधि अधिकृत तपन पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसपछि खानिगाउँको एक घरमा अहिले नगरपालिकाले मासिक ७६ हजार भाडा बुझाउछ । एक वडासहित नगरपालिकाले हालसम्म घरभाडाबापत ९ लाख ९८ हजार ६४० खर्च भएको छ । यो बाहेक नगरपालिकाका सात वडा भाडामा छन् । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै नगरपालिकाका वडा कार्यालयको भाडा ४ लाख ५८ हजार ४ सय खर्च भएको छ । यसरी हिसाव गर्दा नगरपालिकाका सबै वडासहित हालसम्म कुल १४ लाख ५७ हजार ४० खर्च भएको सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद गौतमले जानकारी दिए । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाले ७ लाख ५० हजार र धुर्कोट गाउँपालिकाले ७ लाख ८० हजार घरभाडामै खर्च गरेका छन् ।
तीन गाउँपालिकाको केन्द्र नै टुङ्गिएन
जिल्लाका तीन गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको केन्द्र नै टुङ्गाउन सकेका छैनन् । जिल्लाको इस्मा, मालिका र मदाने गाउँपालिकाले हालसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र नै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । मदानेको केन्द्रबारे खासै चर्चा नभएपनि आधिकारिक रुपले टुङ्गाउन भने गाउँपालिकाले अझैसम्म पनि सकेको छैन् । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा अहिले अदालतमा मुद्धा छ । मुद्धाको केहि छिनोफानो नभएपनि गाउँपाकिा भने बहुउदेश्यीय सभाहलमा कार्यालय संचालन गरेको छ । इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र टुङ्गगो लगाउन अहिले कार्यदल पनि गठन भएको छ । तर कार्यदलको काम पनि अहिलेसम्म केहि आएको छैन् । प्राविधिकले सुरुमा चाप्टारीलाई केन्द्र बनाउन उपयुक्त हुने बताएका थिए । पछि गाउँपालिका कार्यालय वडा नम्बर ५ रजस्थलमा संचालन भयो । तर गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिने समयबारे आफुहरु पनि अनविज्ञ रहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले बताइन् । मदाने गाउँपालिका हाल वडा नम्बर ६ को वडा कार्यालयमा संचालन भएको छ ।
कसैको छैन आफ्नै घर
जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाउन सकेका छैनन् । धुर्कोट गाउँपालिकाले तालिम केन्द्र भनेर बनाएको भवनमा अहिले गाउँपालिका कार्यालय संचालन गरेको छ । मदाने गाउँपालिका वडा कार्यालयमा बसेको छ भने मालिका गाउँपालिका बहुउदेश्ययीय भवनबाट काम गरेको छ । सबैभन्दा धेरै घरभाडा बुझाउने चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीले आफुहरुले क्याम्पसलाई सहयोगस्वरुप रकम दिएको बताए । दुई महिनाभित्र जग्गाको टुङ्गो लगाउने र केन्द्रले रकम दिए भवन बनाउने खत्रीले जानकारी दिए । रेसुङ्गा नगरपालिका केहि महिनापछि आफ्नै घरमा जाँदै छ । अन्य स्थानीय तहको केन्द्र टुङ्गो लागेपनि जग्गाको पहिचान हुन नसक्दा भवन निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन् । जसले गर्दा अझै पनि धेरै रकम घरभाडामै खर्च हुने देखिएको छ ।